iFixit inoburitsa mukati meMweyaTags | Ndinobva mac
iFixit inozivisa mukati meAirTags
Vashandi veIfixit vafunga kuti inguva yekuona iyo mukati maAirTag matsva izvo zvatove mumaoko evashandisi mushure mekutumirwa kwambofambiswa kune vamwe vatengi. Iye zvino tinofanirwa kumirira kanenge mwedzi kuti tikwanise kunakidzwa nazvo. Zvinotaridza kuti chave chigadzirwa kutanga, chakagutsa vanhu uye mutengo wakagadziridzwa hauna kudzima vatengi vayo. Ndosaka iFixit nyanzvi vanoda kuti tione zvatakatenga.
1 iFixit inofananidza AirTags nemamwe mamodheru pamusika
2 Chinhu chakanakisa nezveAirTags inzira yavakaronga mutauri
iFixit inofananidza AirTags nemamwe mamodheru pamusika
Usati wakwanisa kuona mukati memidziyo mitsva yeApple inobatsira kwayo kugona kuwana izvo zvinhu zvatakarasikirwa nazvo, zvakanaka kuti uenzanise nevepo vatove pamusika. Kuti uite izvi, iFixit Akafananidza iwo eApple neTile uye nemamodeli eSamsung. Uye isu tinowana kufanana asi zvakare zvimwe misiyano yakakosha iyo redundancy, ivo vanoita mutsauko pakati peimwe neumwe.
iFixit yakafananidza maAiratag eApple neTile Mate uye Samsung galaxy SmartTag. Muhukuru, zvakajeka AirTags ine saizi diki. Izvi zvinoreva kuti nzvimbo yemukati inoshandiswa kugadzirisa bhatiri pachayo idiki uye kunyangwe saka ivo vakakwanisa kuichengeta nekushandisa zvirinani. Mumwe musiyano unoshamisa mukugadzirwa ndewekuti hapana gomba muAirttag yekuisungira pane chero yakavakirwa-mukati kiyi fob. Izvi zvinoreva kuti pakupedzisira unofanira kutenga chishongedzo kubva kuApple kana kubva kune wechitatu bato kuenda, semuenzaniso, kuwedzera kune makiyi, ayo andinofunga kuti ndiwo anonyanya kubatsira pamidziyo iyi.
Radiograph yemidziyo mitatu inoratidza izvo Apple haina kutambisa nzvimbo yemukati kune chako chinhu tracker. Kune rimwe divi, iyo Tile Mate uye iyo Galaxy SmartTag inoita kunge isina kutora mukana weyese nzvimbo iripo uye "asiya maburi munzvimbo yemukati." Pamusoro peizvi, hapana chimwe cheizvi zviviri, uye kunyangwe hazvo saizi yavo yakakura, inosanganisira Ultra-Broadband tekinoroji senge AirTags. Izvo zvakakosha kuti uzive kuti Samsung nguva pfupi yadarika yakaparura iyo Ultra-wideband musiyano weiyo Galaxy SmartTag; zvisinei, iFixit haina kukwanisa kuwana sampuli yekuenzanisa.
Iyo Tile Mate, Galaxy SmartTag uye AirTags inoratidzira inotsiviwa yemari-mhando mabhatiri. AirTags uye giragi SmartTag shandisa .2032Wh CR66 bhatiri, nepo tile mate inoshandisa diki .1632Wh CR39 bhatiri. Muvatatu vese, iyo nzira yekutsiva bhatiri yakafanana uye haina kunyanya kuomesa kuvhura chishandiso chekutsiva icho.
Midziyo yese mitatu yakavhurika nekungoshandisa minwe yako, Hapana zvimwe zvishandiso zvinodiwa! Izvo zvakati, iyo AirTag ndiyo yakanyanya kuomarara, kunyanya kana uine mafuta kana akanyorova zvigunwe. Fungidzira kuvhura hari yemagaka ine zvigunwe zviviri zvinotsvedza, uye wojairira. Iwo mamwe mamodheru ane akakumikidza zvinhu zvekuparadzanisa zvidimbu nechigunwe. Chinhu chakareruka uye chinoshanda.
Chinhu chakanakisa nezveAirTags inzira yavakaronga mutauri
AirTags ine yakavakirwa-mukati mutauri iyo inoburitsa ruzha kuburikidza neyaviri pairi kuburikidza neKutsvaga Yangu app. Apple yaifanira kufunga nezvenzira nyowani yekukwanisa mutauri mu tracker nekuda kwekuti idiki sei. Iyo kambani yakasarudza kushandisa muviri wese wechigadzirwa semutyairi wevatauri, ine pasi pekavha inoshanda semukurukuri magineti.
Wacherekedza "bhatani" pazasi pekavha? Haisi bhatani rinodzvanywa, sezvakaita matte uye SmartTag, asi magineti ataona kare paX-ray. ndinoziva yakawanikwa mukati mekodhi-yakaumbwa manyorerwo ebhodhi, nested in a coil coil kugadzira gudzanzwi. Ndokunge, mutumbi weAirTag uri mutyairi mutauri. Simba rinotumirwa kucoil, iyo inoenda nayo kumagineti, ichikonzera chivharo chepurasitiki chinodzivirira bhatiri kuti riite maruzha aanoburitsa kana chinhu charasika chasvika kwatiri.
iFixit inotaura kuti sIzvo zvingave zvichikwanisika kuchera gomba kuburikidza nechishandiso kugadzira kushomeka kwayo kwakavakirwa-mukati kiyi fob gomba. Kuita izvi pasina mubvunzo kuchashaisa iyo AirTags garandi, uye nepo zvichikwanisika, iri njodzi. Sekutaura kweFixit, "kuchera panzvimbo isiri iyo kunogona kukonzera kukuvara kwakanyanya."
Iyi ndiyo yekutanga yematanho ekuparadzanisa. Tinotarisira kune yechipiri, kwavanoti ichave neruzivo rwakadzama nezve iyo AirTags redunhu bhodhi uye zvimwe zvakavanzika zvakavanzika.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » dzakawanda » iFixit inozivisa mukati meAirTags
Warren Buffett anorumbidza hutungamiriri hwaTim Cook hweApple nendangariro dzaSteve Jobs
Nyowani Hi-Fi Sarudzo uye XNUMXrd Gen AirPods Inouya Munguva pfupi Zvinoenderana neRunyerekupe